MAYA COD? Guji astaanta codka cas ee bidixda hoose ee shaashadda fiidiyaha
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Daalacanayo Hadda » Sidee loola macaamilaa Macaamiisha Adag?
Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • News • Dib-u-dhiska • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Inta badan adduunku waxay la kulmaan dhammaan noocyada kala duwan ee onkodyada ama dib-u-dhaca safarka ee la xiriira cimilada. Kuwani waxay keenaan booqdayaasha xanaaqsan iyo baahida loo qabo in dib loo habeeyo dhammaan jadwalka safarka.
Maxaa ka xanaajinaya macaamiisha?
Qeybta waqooyi, bisha Ogosto waxaa badanaa loogu yeeraa “maalmaha eyga ”ee xagaaga. Magaca wuxuu ka soo jeedaa xaqiiqda ah in inta badan uu aad u kulul yahay xitaa eygu inuu rabo inuu ku wareego waddooyinka.
Dhamaadka xagaaga dhaqan ahaan sidoo kale wuxuu ahaa xilli dalxiis oo aad u sarreeya inta badan adduunka. Warshadaha dalxiiska ayaa rajaynaya in ka dib hoos u dhaca weyn ee dhaqaale ee sanadkii la soo dhaafay in 2021 ay noqon doonto waqti soo kabasho.
Haddii tallaaladu shaqeeyaan markaa 2021 waxaa laga yaabaa inay tahay waqti ay diyaaradaha iyo hoteellada buuxaan, oo dareemayaasha martida ayaa inta badan xumaada. Tani waa bisha marka arrimuhu, inta badan ka baxsan xakamaynta xirfadlaha dalxiiska, inta badan u muuqdaan inay khaldamaan.
Ogosto waa bil wanaagsan in dib loo eego waxa ka xanaajinaya macaamiisheenna, sida looga ilaaliyo cadhada inay sii xumaato, iyo sida loo ilaaliyo xakamaynta xaaladaha aan la xakamayn karin, sida dib-u-dhaca cimilada la xiriira. Xilliga dalxiiska oo aad u sarreeya, ka faa'iidayso fursadda si aad u tijaabiso xirfadahaaga si aad xaaladaha adag ugu beddesho guulo iyo barashada sida loo yareeyo cadhada loona kordhiyo wax -soo -saarka iyo qanacsanaanta macaamilka. Si lagaaga caawiyo inaad ka badbaado xilligan adag ee dalxiiska, tixgeli kuwa soo socda:
Xusuusnow, adduunka dalxiiska, waxaa had iyo jeer ka iman kara isku dhac iyo qanacsanaanta macmiilka.
Wax kasta oo aad sameysid, mar walba waxaa jiri doona kuwa doonaya wax badan ama aan ku qanacsaneyn waxaad sameyso. Soo -booqdayaashu waxay lacag badan ku bixinayaan fasaxooda waxayna rabaan inay dareemaan maamul, xitaa marka aysan jirin cid xakameyn karta. Samee xaalado uu macmiilku leeyahay xoogaa xakameyn ah haba yaraadee. Tusaale ahaan, halkii aad ka dhihi lahayd wax uun lama qaban karo/lama fulin karo, isku day inaad jawaabta u tiraahdo beddel macquul ah.
Markaad bixinayso beddelladan, hubi in shaqaalaha safka hore had iyo jeer feejignaadaan oo muujiyaan dulqaad. Badanaa, xiisadda dalxiiska waxaa lagu tirtiri karaa maahan xallinta dhibaatada oo dhan, laakiin iyada oo loo oggolaado macaamilka inuu dareemo inuu isagu ama iyadu ku guuleystay ugu yaraan guul yar.
- Ogow xaddidnaantaada sharci, shucuureed iyo xirfadeed.
Waxaa jira sababo badan oo dadku u safraan, qaar farxad, qaar ganacsi, qaarna xaalad bulsho. Kuwa ku jira kooxda dambe, waxaa muhiim u ah xirfadlayaasha dalxiiska inay fahmaan awoodda 'joogitaanka bulshada'. Kuwani waa dad aan jeclayn inay maqlaan marmarsiiyo.
Waxay u dheereeyaan cadhada, oo waxay u gaabiyaan inay cafiyaan. Markaad la macaamilayso, ogow waxa kaa cadhaysiiyay iyo markaad gaadhay xadkaaga. Xigmad u yeelo si aad u ogaato marka dhibku soo baxayo oo caawimaadda ayaa loo baahan doonaa.
-Iska xakamee naftaada.
Dalxiisku waa warshad caqabad ku ah dareenkeenna is-qiimaynta. Dadweynuhu waxay noqon karaan kuwo dalbanaya marmarna aan caddaalad ahayn. Badanaa, dhacdooyin ayaa si fudud uga baxsan gacanteenna. Wakhtiyadaas ayay lagama maarmaan tahay in la xakameeyo cabsida gudaha iyo shucuurta qofka.
Haddii ereyadaadu muujiyaan hal fikrad oo luuqadda jirkaagu ay sheegto mid kale, waxaad dhawaan lumineysaa kalsoonidii.
-Turxiisku wuxuu u baahan yahay mufakiriin dhinacyo badan leh.
Dalxiisku wuxuu dalbayaa inaan baranno sida loo jugleeyo tiro dalabyo iyo baahiyo aan xiriir la lahayn isla waqti isku mid ah. Waxaa lagama maarmaan ah in xirfadlayaasha dalxiiska ay naftooda ku tababaraan farshaxanka maareynta macluumaadka, maareynta dhacdada, iyo laqabsashada shakhsiyadda.
Xilliyada adag, dadka safka hore waxay u baahan yihiin inay awoodaan inay saddexda xirfadood isku mar isku mariyaan.
-Xarumaha dalxiiska ee guuleysta waxay gaarsiiyaan wixii ay ballanqaadaan.
Dalxiisku wuxuu inta badan la dhibtoodaa suuq-geyn xad-dhaaf ah iyo ballanqaadyo ka badan inta uu bixin karo. Marna ha iibin badeecad aysan bulshadaada/soo jiidashadaadu bixin.
Alaab dalxiis oo waarta ayaa ka bilaabmaysa suuq -geyn daacad ah.
-Hoggaamiyeyaasha dalxiiska ee guuleysta ayaa garanaya goorta ay su’aal gelinayaan dareenkooda. Dareenku badiyaa wuxuu noqon karaa kaalmo weyn, gaar ahaan xilliyada dhibaatooyinka.
Iyada oo ku xidhan dareen kaliya, si kastaba ha ahaatee, waxay u horseedi kartaa dhibaato. Isku dar aqoonta dareenka leh xog adag. Markaa ka hor intaadan go'aan gaadhin, u abaabul labada xog ee xogta hab macquul ah.
Dareenkeenu wuxuu ku siin karaa waqtiyadaas dhif ah ee ifaya, laakiin inta badan waxay u isticmaalaan inay ku saleeyaan go'aannadaada xog adag iyo cilmi -baaris wanaagsan.
-Ganacsadayaasha dalxiiska ee guulaystay waxay ka shaqeeyaan sidii ay u xakamayn lahaayeen xaalad adag halkii ay u maamuli lahaayeen.
Khabiirada dalxiiska waxay muddo dheer ogaadeen in iska horimaadyadu badanaa yihiin xaalado lumitaan. Guusha dhabta ahi waxay ku timaadaa ogaanshaha sida looga fogaado iska horimaad. Xilliyada cadhada, u diyaargarow inaad ku fikirto cagahaaga.
Hal dariiqo oo lagu barto farshaxanka fekerka cagaha ayaa ah iyada oo la abuuro xaalado isku dhac iyo tababar loo sameeyo. Sida wanaagsan ee loo tababaray dalxiiskayaga iyo shaqaalaha safka hore ayaa ah, sida ugu wanaagsan ee ay ugu noqon karaan maaraynta dhibaatooyinka iyo go'aammo wanaagsan.
-In aad ogaato jawi mar walba isbedelaya oo ogaada sida fursadaha looga raadiyo waqtiyada adag ama aan xasilloonayn.
Haddii aad isku aragto iska hor imaad, hubi inaad xalliso adigoon dhaawac u geysan macaamilka macmiilkaaga. Ula tartame weeraryahankaaga hab u oggolaanaya macaamilka xanaaqsan inuu arko qaladkiisa/iyada iyada oo aan wejigiisa lumin.
Xusuusnow in mashaakilku uu ka kooban yahay khatar iyo fursad labadaba. Ka raadi fursadda dhibaato kasta oo ganacsi dalxiis.
-Isku day inaad ka dhigto macmiil xanaaqsan kooxdaada.
Markaad isku dayayso inaad kasbato macaamil xanaaqsan, hubso inaad ilaaliso xiriir wanaagsan oo muuqaal ah oo aad ku fiicnaato labada erey ee aad isticmaasho iyo lahjadda hadalka ee la shaqeeyay.
Marka hore macmiilku ha dalooliyo oo ha hadlo oo kaliya marka la dhammeeyo marxaladda hawo -qaadista, u oggolaanshaha macaamilka inuu hawada ka baxo, si kasta oo ay erayadiisu u noqon karaan kuwo aan caddaalad ahayn, waa hab wanaagsan oo lagu muujiyo inaad ixtiraamto isaga/iyada xataa haddii aad diidan tahay.
Sidee halis u tahay safarka? Weydii Dr. Peter Tarlow! ee Badbaadada Dalxiiska:
Dr. Peter Tarlow waa Aasaasaha Ururka Shabakada Dalxiiska Adduunka, urur xubinnimo oo caalami ah oo leh xirfadlayaal dalxiis oo ku jira qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee 127 dal oo xubno ka ah.
Wixii macluumaad dheeraad ah iyo xubinnimada u tag www.wtn.travel
Dr. Tarlow ayaa sidoo kale hoggaamiya Dalxiiska Nabdoon, oo xiriir la leh Kooxda TravelNews iyo shirkad latashi. Wax badan www.safertourism.com
Dr. Peter E. Tarlow waa aftahan caan ah kuna xeel dheer dunida oo ku xeel dheer saameynta dambiyada iyo argagixisada ay ku leeyihiin warshadaha dalxiiska, munaasabadaha iyo maareynta halista dalxiiska, iyo dalxiiska iyo horumarka dhaqaalaha. Tan iyo 1990, Tarlow wuxuu ka caawinayay bulshada dalxiiska arrimaha sida amniga safarka iyo amniga, horumarinta dhaqaalaha, suuqgeynta hal abuurka, iyo fikirka hal abuurka ah.
Maadaama uu yahay qoraa caan ku ah amniga dalxiiska, Tarlow waa qoraa wax ku biiriya buugaag badan oo ku saabsan amniga dalxiiska, wuxuuna daabacaa maqaallo cilmi-baaris oo badan oo la dabaqay oo la xiriira arrimaha amniga oo ay ka mid yihiin maqaallo lagu daabacay The Futurist, the Journal of Travel Research and Maamulka Amniga. Qoraallada ballaaran ee Tarlow ee xirfadaha iyo aqoonyahannada waxaa ka mid ah maqaallo ku saabsan mowduucyada sida: “dalxiiska mugdiga ah”, aragtiyaha argagixisada, iyo kobcinta dhaqaalaha iyada oo loo marayo dalxiiska, diinta iyo argagixisada iyo dalxiiska dalxiiska. Tarlow wuxuu kaloo qoraa oo daabacaa warsidaha caanka ah ee dalxiiska ee dalxiiska Tidbits oo ay akhriyaan kumanaan dalxiis iyo xirfadlayaal socdaal oo ku kala baahsan daafaha dunida afafka Ingiriiska, Isbaanishka, iyo Boortaqiiska.
Madaxweynihii hore ee Afgaanistaan ​​ayaa degay Imaaraadka isagoo haysta $ 169 ...
Daawo boorsooyinkaaga: Tom Cruise oo waalan oo la xaday ...
YAAB! BMW 8 Taxanaha Gran Coupe Edition Gaarka ah
WHO waxay dooneysaa ku-deeqidda 1 bilyan oo qaadasho oo ah COVID-19 ...
Waqooyiga Pacific Airways ayaa duullimaadyo cusub oo Boeing ah ...
MICE Ganacsigii wuxuu dib ugulaabtay Guam tallaal ...
Dakhliga hoteelada Hawaii ayaa si aad ah u kordhay Juun 2021
Dalxiiska Trinidad oo Dib-u-Xoojin la Sameeyay Nin Cusub oo Mas'uul ah
Miyuu hudheellada maalinlaha ah ee hudheellada dhintay?
Dhaxalka Tokyo 2020 wuxuu saameyn xoog leh ku yeelan karaa ...
Maamulaha Moderna: Faafida COVID-19 waxay dhammaan doontaa badhtamaha 2022
Hubka ugu Fiican COVID-19 Delta Variants
Maamulaha guud ee Wizz Air £ 100 Million oo Guno Gunooyin ah
Billy Bishop Airport Magaalada Toronto oo dib u bilaabi doonta ganacsiga ...
Diyaaradda Ethiopian Airlines iyo Liege Airport oo la kordhiyay ...
Air Canada ayaa bilawday adeeg cusub oo aan joogsi lahayn oo u dhexeeya ...
Maxaa ku cusub Bahamas bisha Ogosto
Madaxweynaha Skål Asia: La kulan musharax Andrew J. Wood